Professor Mohamed Abdi Mohamed [ghandi] oo ay Suurto Gal Tahay in uu Gacanta u Galo Ururuka ONLF Garabka Maxamed Cumar Cismaan. – Rasaasa News
Jun 6, 2010 Professor Mohamed Abdi Mohamed [ghandi] oo ay Suurto Gal Tahay in uu Gacanta u Galo Ururuka ONLF Garabka Maxamed Cumar Cismaan.
ONLF garabka M C Cisman, ayaa waxay dadaal dheer ugu jiraan sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen dhaqdhaqaaqa ka socda Jubbooyinka ee uu horseedka ka yahay Professor Ghandi. Waxaan ilaa iyo hada la sheegayaa in ay u balan sadeen Ghani in June 12, 2010 ay martiqaad casuumad, oo kala tuuro qorshaha Jubbooyinka ah ay ugu qabtaan London, dalka Ingriiska.
Hadaba, hadii ay arintani dhacdo oo uu Professor Ghandhi gacanta u galo kooxda Jwxo-shiil, waa garabka ONLF ee Maxamed Cumar cismaan, muxuu noqon doonaa mustaqbalka dadaalada dhaqdhaqaayada ay beesha Absame ka wado gabalada Jubbooyinka?
Professor Ghandhi, waxaa uu ka tirsan yahay dawlada Meel uun ku gaadhka ah ee Somaliya, waxaana uu ahaa maskaxdii ka dambaysay ciidamda Kenya loogu tabobarayey dawlada Somaliya kuwaas oo u badnaa beel. Meesha Sheekh Shariif ay dawlada Jabuuti u soo tabobaraysay ciidan u badan beel, iyo Itobiya oo iyadu ciidamo u soo tabo baraysay Aadan Daba-geed iyo Yugandha oo iyana Cumar Cabdirashiid xiigaa u soo tabobaraysay.
Dhinaca kale, waxaa uu khilaaf uu khilaaf soo kala dhexgalay Sheekh Axmed Islan iyo ururka Al-shabaab oo iyagu xoog ku jooga gabalda Jubooyinka, mudana uu dagaal ka dhex socday. Ururka Al-shabaab ayaa iyagu Sheekh Axmed iyo dadka degaanka ah taageera ku eedeeyey in ay gacan ka hellaan ururka ONLF, arinkaas oo ay ula jeedaan siyaasad qabiil.
Ghandhi, waxaa laga qaaday Jagadii difaaca ee uu dawlada Somaliya u hayey, isla markaasna waxaa uu tababarkii ciidan u dhamaaday ciidankii Kenya ee uu isagu uruurintooda masuulka ka ahaa. Waxayna dawladu damcday in ciidankaas la geeyo Muqdisho, waxaana arinkaas ay dawladu u dirtay Cabdirashiid Xidig oo isaga laftigiisu ka soo jeeda Jubooyinka.
Beelaha Jubooyinka oo 100% Sheekh Axmed Islaan taageero balaadhan u haya ayaa waxay talo ugu soo jeediyeen Gandhi in aan ciidankan la dhaafin gabalada Jubooyinka, ee hadii uu Al-shabaab la dagaal galayo uu gabaladooda uga saaro. Gandhi arintaas aad ayuu ula dhacay, beelaha Absamena gudo iyo dibadba waxay siiyeen taageero balaadhan, sidaasina waxaa looga doorbiday Gandhi, Xiddig oo markaas loo arkayey in uusan wadin danta beesha.
Gandhi, waxaa taageero saxiix ah siiyey dhawr kun oo ruux 170 ka mid ah ay degan yihiin dalka Maraykanka. Siddoo kale waxaa taageero siiyey Gaandhi Jaaliyadaha ka soo jeeda Jubooyinka, meel ay joogaanba oo ay ugu xoog badan tahay Jaaliyada Midowga Jubooyinka oo ka jirta dalaalka Yurub.
Ghandi oo ay la shaqaynayaan guurtida gabalda Jubooyinku iyo Jaaliyaadka dibadu waxay suurto galiyeen isku xidhnaan xoog leh oo gude iyo dibadba ah iyo waliba iyada oo la sameeyey gudiyo u dhisan qaab dawladeed oo ay beel waliba ku jirto.
Dhinaca kale waxaa ay beeshu suurto galisay in ay gacanta isu saarto Professor Ghandhi iyo Sheekh Axmed oo isku af gartay in ay ka wada shaqeeyaan danta guud dadweynaha gablada Jubbooyinka oo iyagu jirabnaa 19kii sano ee uu socday dagaalka sokeeye ee Somaliya.
Hadab, waxaa soo baxaya warar calool xumo u ah guud ahaan dadweynaha Gabalda Jubooyinka iyo dadaalkii ay sameeyeen guurtida iyo Jaaliyaadka beelaha Absame ee guddo iyo dibadba.
Waxaan tan iyo 2008, isagu waday istiraaiijiyada khaldan ka waday gabalada Jubooyinka Maxamed Cumar Cismaan oo ah garab ka mid ah garabyada uu u kala Jabay ururkii ONLF. Waxaana uu dagaal ay dad Ogadeen ahi iskaga horiymaaddeen ka riday Cali-buulaay oo waxy u jirta degmada dhoobley bishii November 2008.
Jwxo-shiil, ayaa waxaa uu dadaal ugu jiraa in ayna cid aan garabkiisa ahayn oo sheegata magca beesha Absame ayna wax dhaqdhaqaaq ah ka samaynin dhulka Somalida Ogadeeniya iyo gabalada Jubooyinka oo ay degan yihiin dadka Absamaha ah.
Waxaa ay kooxda isaga taageertaa dhibaatooyin ugu gaysteen dalalka reer galbeedka oo lagu qabanayey shirar nabdeed oo ku aadan gabalka Somalida Ogadeeniya. Waxaa kale oo ay weerareen shirar ay qabanaysay Somali galbeed iyo waliba kuwa ay qabatay Jaaliyada Midowga Jubaland.
Intaas oo dhibaato ah waa yeyna jirin cid kale oo qaaraanka kula wadaagta ee kama ah wanaag Jamhadeed, siyaasada Jabhada ururka ONLF, waxay ku aadan tahay dhulka Somalida Ogadeeniya.
Hadab, hadal yeydaan ku daaline waxaa haboon in aanu farata idinka saaro, cida uu haatan hilaabta u saaray in ay hogob ka tuuro hogaanka Gaandhi iyo Sheekh Axmed ee gabalda Jubooyinka, waxaa ka mid ah;
Yuusuf Cadami oo ah xubin qarsoon, ONLF garabka Cumar Cismaan, Maxamuud Maxamed Tarax oo haatan M C Cisman hoos galay uuna ku darsaday kaligii golihiisa dhexe, Faarax Gurxan [ex-colonel somali marine] oo ah xubin qarsoon, ONLF garabka M C Cisman, Cabdi Maxamed Tarax [ex-general secretary of somali national refugee agency, now member of somali tranistional parliament], Faarax Dahir Afey [ex-somali minister, now member of somali transitional parliament] ahna xubin qarsoon, ONLF garabka M C Cisman. Iyo ma halmaamine ninka ah maskaxda ka dambaysa [mastermind] abaabulkan lagu xagal daacinayo dadaalka Beelaha Absame ee gabalada Jubooyinka Duran Axmed Xaashi [ex- member of western somali liberation front], haatana ah xubin qarsoon, ONLF garabka M C Cismaan.
Uguma talo galin in aan maanta qoraalkan ugu sheego dadweynaha Somalida Ogadeeniya iyo Absameba meesha ay siyaasadi la fadhiisatay garabka ONLF ee M C Cisman, oo ku jira galgalasho iyo galaafasho.
Waana sababata maanta keentay in uu uruusado, dadkan isaga oo jecel in uu ku lug yeesho Absamihii uu ka faani jiray ee ay “O” ku kala tageen. Kuligood dadkani waxaa weeye dad dooranyo ah [pensioners] oo aan xiligan lagu jiro hogaanka ummada daba socod mooyee aan lahayn awood ay wax ku hogaamiyaan.
maxamed yuusuf shiil myshiil@rasaasa.com
Qoraalka oo dheer dartiis qayb dambe la soco ……
Kooxdii Jwxo-shiil, oo Xurguftii u Dhaxaysay ay Cirka Isku Shareertay, Ayna Suurto Gal Tahay in Ina-dhuubo uu Kaga Dhawaaqo Eritrea Koox Cusub.